Adeegyada Jaleel – Jaleel Health Consultancy
Shirkadda Jaleel waa shirkaddii ugu horeysay ee laga furo dalka Soomaaliya taa oo ku howlan Talobixinta iyo wacyigelinta dhanka caafimaadka, fududeynta helitaanka adeegyo caafimaadka guud iyo keydinta xogta caafimaadka dalka. Socodsiinta howlaha aan xusnay waxa aan u maareyna sida hoos ku qoran:
Howsha talobixinta ee ay shirkaddu qabato waxa ay bartilmaameedsataa laba dhinac oo kala ah; xarumaha caafimaadka iyo dadka u baahan adeegyada caafimaad. Labada dhinacba waxa aan ula falgalnaa sida soo socota:
(a). Xarumaha bixiya adeegyada caafimaadka (Health Providers):
Xarumaha baxsha adeegga caafimaadka waxaan kala talinaa horumarinta adeegyadooda, tababbarka shaqaalaha, iyo fududeenta xiriirrada shirkadaha caalamiga ah ee baxsha qalabka caafimaadka iyo daawooyinka. Sidoo kale, waxa ay shirkadda Jaleel iyo xarumaha caafimaadku iska kaashadaan qabanqaabinta iyo qabashada ololayaasha caafimaadka ee muhiimka ah.
(b). Dadka ka faa’ideysta adeegyada caafimaad (Health Beneficiaries):
Shirkaddu waxa ay caawin hagarla’aan ah u fidisaa dadka daneeya adeegyada caafimaad, iyada oo si furan oo faahfaahsan ula wadaagta talooyin suurtagelinaya helitaanka goobaha ugu habboon ee ay dadku u doonan karaan hadba adeegga caafimaad ee ay rabaan. Waxaan kale oo aan dadka ka caawinaa fududeynta socdaallada caafimaad ee dalka dibaddiisa, annaga oo la wadaageyna xog ka kooban kaladuwanaanshiyaha dalalka iyo isbitaalada, marka laga eego dhanka tayada iyo qarashaadka.
Annaga oo kaashanayna khibradda iyo xogogaalnimada aan u leenahay dhanka caafimaad, waxa aan abaabulnaa dhaqdhaqaaqyo wacyigelin ah oo kor loogu qaadayo ogaalka iyo kawarqabka bulshada ee arrimaha caafimaadka. Howlahan waxa aan u qaabeynaa habab isugu jira kulammo aqooneed iyo weliba qoraallo cilmiyeed oo aan dadka la wadaagno.
Adeegyo Caafimaadka Guud :
Shirkaddu waxa ay iskeed u fulisaa howlgallo caafimaad oo si bilaash ah loogu gurmanayo dadka nugul ee gurmadka caafimaad ee degdegga ah u baahan, sida dhallaanka iyo hooyooyinka. Waxaan kale oo aan samaynaa ololeyaal caafimaad oo wareega (Mobile clinic campaigns).
Keydinta xogta caafimaadka dalka :
Maadaama aanay xilligan jirin ilo si gaar ah loogu soo hagaago xogaha caafimaad ee dalka, waxa ay shirkadda Jaleel ku hanweyntahay in ay buuxiso baahida loo qabo keyd dhammeystiran oo looga haqab-beeli karo xogta caafimaad ee dalka. Waxa aan kaashan doonnaa cilmibaaris joogta ah oo beegsanaysa uruurinta, falanqeynta iyo wadaajinta xog kasta oo muhiim u ah lasocoshada xaaladaha caafimaad ee dalka, si ay taas waxtar ugu yeelato cid kasta oo ay khuseyso.